ShweMinThar: ဂစ်တာသမိုင်း (သို့) .....
== ဂစ်တာ နှင့် စစ်ပွဲများ ==
ယနေ့ ဂစ်တာများ ၏ ခေတ်စားမှု့သက်တမ်း သည် တိုတောင်းသည် ဟု ယူဆ နိုင် သော်လည်း နှစ်ပေါင်း ထောင် နှင့် ချီသည့် ရှည်လျား သော သမိုင်းကြောင်း ကို ပိုင်ဆိုင် ထား လေသည်။ ရှေးယခင် က အာရှမိုင်းနား ဟူ ၍ ခေါ်တွင် သည့် အီဂျစ်ပြည် ၌ လွန်ခဲ့ သည့် ဘီစီ ၁၀၀ဝခန့် အေဒီ ၆၀ဝ ခန့် လောက် မှ ဂစ်တာ နှင့် နီးစပ် သော ရုပ်ကြွင်းတွေ ကို တွေ့ရှိ ခဲ့သည်။ သမိုင်း အထောက်အထား တွေ အရ ဂစ်တာ ရဲ့အစောဆုံး တူရိယာ ဟာ အာရပ်နိုင်ငံတွေ ကနေ စတင် ဆင်းသက် ပေါက်ဖွား ခဲ့ပြီး ဂစ်တာ ဆိုသည့် ဝေါဟာရ မှာ ရှေး ဂရိ လူမျိုးများ အမြတ်တနိုး တီးခတ် ခဲ့ကြ တဲ့ ကီသာရာ ( KITHARA ) တူရိယာ မှ ဆင်းသက် လာသည် ဟူ၍ လည်း လက်ခံ ထား ကြ ပါတယ်။
အေဒီ ၇၁၁ တွင် မူးဝါး ( MOOR ) ဟု ခေါ်သော လူမျိုးစု များသည် အာဆီးရီးယန်း ၊ ပါရှန်း နှင့် ဟီးဘရူး နိုင်ငံ များကို ကျူးကျော် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက် ကြသည်။ ထိုအချိန် နောက်ပိုင်း တွင် ဂစ်တာ ဖြစ်လာ မယ့် တူရိယာ ဟု မှန်းဆ ရသည့် ရက်ဘတ် ( REBEC ) တူရိယာ အပါအဝင် ကြိုးတပ် တူရိယာ အမျိုးမျိုး ကို စပိန် နိုင်ငံ ကို ယူဆောင် သွားကြ လေသည်။
ထို တူရိယာ သည် ယနေ့ခေတ် မြင်တွေ့ ရသော ဂစ်တာ ပုံစံ နှင့် လုံးဝ မတူသေး ဘဲ အရွယ်အစား သေးငယ် ပြီး တယောပုံ သဏ္ဍာန် နှင့် ပိုမို ဆင်တူ လေသည်။
ဂစ်တာ ရဲ့ပုံ သဏ္ဍာန် နှင့် ဖွဲ့စည်း ပြုလုပ် ထားပုံ များသည် တီးခတ် သည့် အခါ လွယ်ကူ စေရန် နှင့် ခေတ်မှီ စေရန် အတွက် မိမိ စိတ်ကြိုက်﻿ ပြုလုပ် ခဲ့ကြ သော အခါ ၎င်း ၏ ခိုင်မာ သည့် သမိုင်းကြောင်း သည် လည်း ဝေးဝါး မှေးမိန် စေ ခဲသည်။
၁၂ ရာစု တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ကရူးဆိတ် စစ်ပွဲများ ကလည်း ယနေ့ ခေတ်ဂစ်တာ နှင့် တူသည့် ကြိုးတပ် တူရိယာ တခု ကို ဥရောပ တစ်လွှား တွင် ပြန်နှံ့သွား ခဲ့သည်။
ထို တူရိယ သည် နှစ်ပင် စီပူး ထားသည့် ကြိုး ၄ စုံ၊ စုစုပေါင်း ကြိုး ၈ ချောင်း တပ်ထား သော တူရိယာ ဖြစ်ပြီး ဂစ်တန် ( GITTERN ) ဟူ၍ ထင်ရှား ခဲ့သည်။ စောင်းသမား ခရီးသွားများ၊ ကဗျာဆရာ ခရီးသွားများ၊ အဆိုတော် ခရီးသွားများ သည် ထို တူရိယာ နှင့် တွဲပြီး သူတို ၏ ခံစားဖွဲ့သီဆိုမှုများ ကို အလယ်ခေတ် ( AD 600-1450 ) တလျှေက်လုံး သီဆို တီးမှုတ် ခဲ့ ကြ လေသည်။
ဂစ်တာ ၏ တိကျ ခိုင်မာ သော သမိုင်းကြောင်း အား ၁၃ ရာစု စပိန် နိုင်ငံ မှ မူးဝါး လူမျိုးများ ၏ သီဆို ဖျော်ဖြေ ပွဲများ မှ စတင် ပေါ်ပေါက် လာ ခဲ့သည် ဆို လေသည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ဝ မျှ ကြာညောင်း ပြီး နောက် ၁၆ ရာစု စပိန်နိုင်ငံ ၌ တီးခတ်မှု့ ပုံစံသစ်၊ ဟန်သစ်များ အပြိုင်အဆိုင် တိုးတက် လာပြီး ဂစ်တာ အမျိုးအစား အနေ ဖြင့် အနည်းဆုံး ၃ မျိုးမျှ ခေတ်စား ခဲ့သည်။
ထို အရာများ မှာ
1 . ကြိုး ၆ စုံ စုစုပေါင်း ၁၂ ကြိုးတပ် ဗီဟူလာ ( VIHVELA ) ထို တူရိယာ နှင့် တွဲဖက် တီးခတ် ရန် အတွက် သင်္ကေတ ဇယား ဖြင့် ရေးသား ထားသော နှစ်ယောက်တွဲ တီးလုံး၊ သီချင်း၊ အက သီချင်း များ အပါ အဝင် စုစုပေါင်း စာအုပ် ၇ အုပ် ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်။
2 . ကြိုး ၅ စုံ၊ စုစုပေါင်း ၁ဝ ကြိုးတပ် ဂစ်တာရာ အက်စပါ နိုလာ ( GUITRRA ESPANOLA ) ၁၆ ရာစု နောက်ပိုင်း မှ နေ၍ ၁၇ ရာစု တလျှောက်လုံး ခေတ်စား ခဲ့ပြီး လူးတ် (LUTE) တူရိယာ ၏ နေရာ တွင် အစားထိုး အသုံးပြု ခဲ့သည်။ ဂစ်တာရာ အက်စပါ နိုလာ ကော့ဒ် နှင့် တီးရန် အတွက် ပင် အသုံးပြု ခဲ့ပြီး၊ ၁၇ ရာစု နှောင်းပိုင်း မှာ တော့ ပြင်သစ် ကို စိမ့်ဝင် ပျံနှံ့ သွားခဲ့ ပါသည်။
3 . ကြိုး ၄ စုံ၊ စုစုပေါင်း ကြိုး ၈ ချောင်းတပ် ဂစ်တာရာ ( GUITARRA ) တို့ဖြစ် သည် ။
== ၁၇ ရာစုနှစ် ဂစ်တာ အား ရူးသွပ်မှု့ ==
၁၇ ရာစု တွင် ဂစ်တာ ၏ အခန်းကဏ္ဍ သည် အရှိန်အဟုန် နှင့် ပြန့်ပွားဖို့ အစပျိုး သည့် ကာလ တခုပင် ဖြစ်ပါ သည်။ ကော့ဒ်ဖြင့် တီးသည့် စနစ်များ မှ အနုစိတ် ပိုမိုချဲ့ထွင် ကာ ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသော လက်ချောင်းများ ဖြင့် တီးခတ် ရသည့် ဂန္တဝင် ဂစ်တာ ( CLASSICAL ) တီးခတ် ဟန်များ အစားထိုး ဝင်ရောက် ခဲ့ ပါသည်။
၁၈ ရာစု မှာ ပြောင်မြောက် ထူးချွန် သော ဂစ်တာ ပညာရှင်များ ပေါ်ထွန်း လာခဲ့ ကြပြီး ဂီတ ပညာရှင် ကြီး ပါဂါ နီနီ ( NICCOLO PAGANINI 1788-1840 ) သည် တယော သာမက ဂစ်တာ ကို လည်း ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက် သည့် ပါရမီရှင် တဦး ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။
သံစုံတီးဝိုင်း ကြီးများ ၏ ဂီတ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြ သော ဟေဒင် ( FRANZ JOSEPH HAYDN 1732-1809 ) ၊ ရူးဘတ်၊ ( FRANZ SCHUBERT 1797-1828 ) ၊ ဝက်ဘာ ( CARL MARIA VON WEBER 1786-1926 )၊ ရိုဆိုနီ ( GIOACHINO ROSSINI 1792-1868 ) တို့သည် ဂစ်တာ အတွက် ဂီတ သင်္ကေတ များ ကို ရေးစပ် တီထွင် ပေးခဲ့ ကြ ပါသည်။
ထိပ်တန်း လက်မှု့ပညာရှင်ကြီး ဖြစ်သော စထရာ ဒီဗားရီးယပ် သည် သူ့ရဲ့နာမည်ကျော် တယော တွေ နည်းတူ ဂစ်တာတွေ ကိုလည်း အထူး ပြုလုပ် ပေးခဲ့ ပါသည်။
၁၉ ရာစု အစောပိုင်း မှာ စပိန် နိုင်ငံသား ဖာနန်ဒို ဆော ( FERNANDO-SOR 1778-1839 ) ဟာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာ အထိ ကျော်ကြား အောင်မြင် ခဲ့တဲ့ ဂစ်တာ ပညာရှင် တဦး ဖြစ် ခဲ့ပြီး သူ နဲ့ ခေတ်ပြိုင်တွေ ဖြစ် ကြတဲ့ ဒီယွန် ဆီယို အာကွေဒို ( DIONISIO AQUADO )၊ မဲတီအို ကာကက်ဆီ ( MATTEOCARCASSI )၊ ဖာဒီနန် ကာရူလီ ( FERDINAND CARULLI )၊ မူရို ဂျူလီယန်နီ ( MAURO GIULIANI ) တို့ ဟာလည်း နာမည်ကျော် ဂစ်တာ ပညာရှင်ကြီး တွေ ဖြစ်ခဲ့ ကြ ပါတယ်။
ဖာနန်ဒိုဆော နဲ့ သူ၏ ခေတ်ပြိုင်တွေ ဟာ သင်တန်းကျောင်း တွေ ဖွင့်လှစ် ပို့ချ ခြင်း၊ ဂီတပွဲ တွေ တင်ဆက် ခြင်း စတဲ့ ကြိုးပမ်းမှု့တွေ နဲ့ ဂစ်တာ ပညာ ကို ပြန့်ပွားဖို့ လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အဲ့ဒီ နောက်ပိုင်း ဖရန်စစ်စကို တားရက်ဂါ ( FRANCISCO TARREGA 1852-1909 ) ဟာ အထူးချွန် ဆုံး ဂစ်တာသမား အဖြစ် သတ်မှတ် ခံခဲ့ ရပြီး မျက်မှောက် ခေတ် ဂန္တဝင် ဂစ်တာသမား များ ကို ဦးဆောင် ခဲ့သူ တဦး ဖြစ်သည်။
== အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နှင့် ဂစ်တာ ==
စည်ပင် တိုးတက် လာ ကာစ အမေရိကန် ၌ စွန့်စား သွားလာ သူများ၊ နယ်မြေသစ် ရှာဖွေ သူများ စသည် တို့သည် လှည်းတန်း ရှည်ကြီးတွေ နှင့် လှည့်လည် သွားလာ ကြပြီး စခန်းချ အပန်းဖြေ သည့် အခါတွင် မီးပုံဘေး ၌ ဂစ်တာတီး ၍ အမောဖြေ ကြ သည်။
ဤ သို့ဖြင့် ဂစ်တာ ဟူသော တူရိယာ သည် လည်း အမေရိကန် ၏ နေရာ အနှံ့အပြား လိုက်ပါ ခဲ့ရ ပြီး ၁၉ ရာစု အကုန် ၁၉၀ဝ ပြည့်နှစ် တစ်ဝိုက်တွင် မူ အမေရိကန် လူမည်း ၏ ရင်တွင်း ခံစားချက် များမှ ပေါက်ဖွား လာသော အာဖရိကနွယ် သည့် ရက်ဂေး နဲ့ ဘလူးစ် အမျိုးအစား ဂီတများ အစပျိုး အားယူ နေပြီ ဖြစ်သည်။
ကျေးလက် တောနေ သူများ ၏ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေ တိုင်း၌ လည်း ဂစ်တာ နှင့် တယော သည် မပါ မဖြစ် အသုံးပြု နေကြ ပါပြီ ဖြစ်သည်။ ဖာနန်ဒို ဆော မှ စတင် ပြန့်ပွား ခဲ့သည့် ဂန္တဝင် ဂစ်တာ တီးဟန်တွေ များသည် လည်း အဆင့်ဆင့် တိုးတက် လာ ခဲ့ပြီး စပိန် လူမျိုး အဲန်ဒရက် ဇီဂိုး ဘီးယား ( ANDRES SEGOVIA 1893-1987 ) ၏ ၁၉၂၈ နယူးယောက်မြို့တွင် ကျင်းပ ခဲ့သည့် ဂန္တဝင် ဂီတပွဲ မှ စပြီး ဂစ်တာ ကို ကမ္ဘာ က အာရုံစိုက် လာကြ ပါသည်။
ဇီဂိုး ဘီးယား ဟာ သူ့ ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး ဂစ်တာ ကို အမြတ်တနိုး တီးခတ် ခဲ့ပြီး ဂစ်တာ ဂန္တဝင် တေးသီချင်းပေါင်း များစွာ ကို ဖွဲ့ဆို ရေးစပ် ခဲ့ ပါသည်။
သူ့ ရဲ့ဂစ်တာ လေ့ကျင့်ခန်း များကို အမေရိကန် တွင် ရှိသော ကျောင်းပေါင်း ၁၆၀၁ ကျောင်း မှာ သင်ကြား ပို့ချ နေဆဲ ဖြစ် သည်။
၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ် တွင် ဂစ်တာ ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ မူ့ကို တဟုန်ထိုး တိုးတက် စေခဲ့ သည့် ဖြစ်ရပ် တခု မှာ ရှာလီ ခရစ်စတင် သည် ဂစ်တာ ရဲ့အသံ ကို ပစ်ကပ် ( PICK UP ) တပ်ဆင်ပြီး အထူးချဲ့ ထွင်ပေး တဲ့ အသံချဲ့စက် နဲ့ တွဲဖက် ပေးနိုင် ခဲ့ခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။
ထို အချိန် မှ စပြီး ဂစ်တာသံ ၏ အတိုးအကျယ် ကို လိုအပ် သလို လုပ်နိုင် သော အနေအထား ကို တဆင့် ပြီး တဆင့် ပြောင်းလဲ တိုးတက် ရောက်ရှိ လာသည်။
== ဗြိတိန် ဂစ်တာ အကျော်အမော်များ ၏ ကြိုးပမ်းမှု့ ==
ရော့ခ်အင်ရိုး ( ROCK AND ROLL ) လူငယ် အဆိုတော် ပရက်စလေ သည် ၁၉၅၆ မေလ မှာ ထုတ်ဝေ ခဲ့သည့် ( HEARTBREAK HOTEL ) ဓါတ်ပြား နှင့် ထိပ်ဆုံး ကို ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ဂစ်တာ လွယ်ပြီး သီချင်း ဆိုဟန်များ ကြောင့် လူငယ်ထု ကြား မှာ ဂစ်တာ သည် အရှိန်အဟုန် နဲ့ ပြန့်ပွား ခဲ့ သည်။
၁၉၆ဝ နှစ်များ တွင် ရိုးရာ ဘလူးစ် ( TRADITIONAL BLUES ) နှင့် ခေတ်ပေါ် ဂီတ ( WHITE POP MUSIC ) ရောမွှေ ထားသော ( RHYTHM AND BLUES (or) R n B ) ဂီတ အမျိုးအစား ခေတ်စား လာခဲ့ ပြီး လူမည်း ဂစ်တာသမား ချပ်ဘာရီ ( CHUCK BERRY ) ၏ လက်သံ များသည် အင်္ဂလိပ် ခေတ်ပေါ် ဂီတ စာအုပ်များ အပေါ်တွင် ဩဇာ လွှမ်းမိုး သက်ရောက် ခဲ့သည်။
ပရက်စလေ ၏ သီချင်းတွေ ကြားတွင် ကြီးပြင်း သည့် လူငယ်များ မှ နေ၍ ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ သော အင်္ဂလိပ်ပေါ့ နဲ့ ရော့စ် အဖွဲ့ ဖြစ်ကြ သည့် ( BEATLES 1960 ) သည် ကမ္ဘာတွင် အကြီးအကျယ် အောင်မြင် ခဲ့ပြီး ဂစ်တာ ကို ခေတ်ပေါ် ဂီတ ၏ အဓိကမဏ္ဍိုင် တူရိယာ အဖြစ် သို့ ရောက်ရှိ အောင် ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ ကြ ပြန်သည်။
( COUNTRY ) နဲ့ ( JAZZ ) ဂစ်တာ အကျော်အမော် တွေ ဖြစ်ကြ သော ချက် အက်ကင် ( CHET ATKINS )၊ မာ့ခ် ခနော်ဖလာ ( MARK KNOPFLER ) နှင့် ရွိုင်း ကလာစ် ( ROY CLARK ) တို့နှင့် အတူ ကမ္ဘာကျော် ဂစ်တာ တီးဝိုင်း VENTURES တို့၏ ဂစ်တာ လက်သံ များသည် ဂစ်တာ ဝါသနာရှင် အများအပြား ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ ပြန်သည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် အင်အား ကောင်းနေ သော ROCK ဂီတ ၏ Distortion အသံ၊ Feedback အသံ၊ Wah Wah Effect စသည် တို့၏ ဖခင်ကြီး တဦး မှာ လူမည်းဂစ်တာသမား ဂျင်မီ ဟန်းဒရပ် ( JIMMI HENDRIX 1942-1970 ) ပင် ဖြစ်တော့ သည်။
သူ ၏ ဘယ်လက် ဖြင့် ဂစ်တာ ကို ကျွမ်းကျင် စွာ တီးခတ် ခဲ့သည့် ဟန်ပန်များ ဟာ လည်း လူငယ် ပရိသတ် တွေကို အရူးအမူး ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့ သည်။
== ဂီတ ပုံစံသစ်များ ထပ်မံ တိုးချဲ့ခြင်း ဖြင့် ဂစ်တာ အား ရူးသွပ်ပုံ ==
ကမ္ဘာကျော် ဂစ်တာ ကုမ္ပဏီကြီး များ ဖြစ်ကြ သော ဂစ်ဘဆင် ( GIBSON ) ၊ ဖန်ဒါ (FENDER) တို့ ဟာလည်း ဂစ်တာ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ကို ပုံစံပေါင်း မြောက်များ စွာဖြင့် ထုတ်လုပ် ခဲ့ကြ ပြန်သည်။
ယနေ့ခေတ် အချိန်အခါ တွင် လျှပ်စစ်ဂစ်တာ ( ELECTRIC GUITAR ) များ၏ အသံ ကို အမျိုးမျိုး ပြောင်းနိုင် သော စက် ( GUITAR EFFECT PROCESSOR )၊ အသံချဲ့စက် ( AMPLIFIER) များ အား တဆင့်ထက် တဆင့် ပိုမို ကောင်းမွန် တိုးတက် လာအောင် တီထွင် ဖန်တီး အသုံးပြု နေကြ သည်။
ယနေ့ ဂီတ အမျိုးအစား များ ဖြစ်ကြ သည့် ဂန္တဝင် ဂီတ ( CLASSICAL ) ၊ စပိန် ဖလန်မန်ကို ( FLAMINCO ) ၊ ဘလူးစ် ( BLUES ) ၊ ဂျက်ဇ် ( JAZZ ) ၊ ကလပ်စစ် ရော့ခ် ( CLASSIC ROCK ) ၊ ရော့ခ် အဲန် ရိုး ( ROCK n ROLL ) ၊ ရစ်သန် အဲန် ဘလူးစ် ( R n B ) ၊ ရော့ခ် အဲန် ရိုး ( ROCK n ROLL ) ၊ ဟာ့ဒ် ရော့ခ် ( HARD ROCK ) ၊ ဟဲဗီး ရော့ခ် ( HEAVY ROCK ) ၊ ဟဲဗီး မယ်တယ် ( HEAVY METAL ) ၊ ဆောဖ် ရော့ခ် ( SOFT ROCK ) ၊ အော်တာ နေးတစ် ( ALTERNATIVE ) ၊ အင်ဒီ ရော့ခ် ( ENDI ROCK ) စသည့်
အမျိုးအစား များစွာ တို့တွင် ဂစ်တာ ကို လုံးဝ မပါ မဖြစ် တီးခတ် ကြ ရပြီး ဂစ်တာ နှင့် ပတ်သတ် သည့် စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ အားလုံး ကို လည်း အပြိုင်အဆိုင် ဆက်လက် တီထွင် ထုတ်လုပ် တီးခတ် နေကြ သည့် အတွက် ဂစ်တာ တူရိယာ ၏ အခန်းကဏ္ဍ မှာ လည်း နောင် နှစ်ပေါင်း များစွာ တိုင်အောင် ဆက်လက် ရှင်သန် နေဦး မြည်ပင် ဖြစ်သည်။
(Guitar ဝေါဟာရအချို့မှာ အကျယ်​တ၀င့်​ ဖတ်လို့ရအောင် လင့်ခ်ချိတ်ပေးထားပါတယ်)
Posted by Alex Aung at 5:13 AM
Labels: ဂီတဆိုင်ရာဆောင်းပါး, သမိုင်းနှင့် မျက်မှောက်ရေးရာကဏ္ဍ